Alaab-qeybiyeyaasha galleyda macaan, warshadeeyayaasha Bolise
[Magaca Laatiinka] Zea Mays L.
1. Fiitamiino iyo carotene, waxay hoos u dhigtaa kolestaroolka, waxay hoos u dhigtaa cadaadiska dhiigga, waxay ka hortagtaa arteriosclerosis iyo cudurka Alzheimers;
2. Waxay ilaalin kartaa indhaha, wanaajin kartaa aragga, waxayna ka hortagtaa gabowga indhaha;
3. Waxay kor u qaadi kartaa kala qaybinta unugyada iyo dib u dhigista gabowga;
4. Waxa ku jira Selenium iyo cellulose, waxa kale oo ay kor u qaadaa soo saarista sunta iyo Kansarka ee jidhka,waxana ay leedahay saamaynta ka hortagga kansarka.
Ku saabsan Soosaarka Galleyda Macaan
Qaybaha firfircoon ee ugu muhiimsan ee laga soosaaray hadhuudhka macaan waa saliid dufan, saliid kacsan, walxo xanjo u eg, resin, picroside, saponin, alkaloids, acids organic iyo wixii la mid ah.
Soosaarka galleyda macaan waxaa loo isticmaali karaa xaaladaha uric acid sare sida gout iyo noocyada arthritis-ka qaarkood. Waxay kaa caawinaysaa in la yareeyo xaaladaha bararka xanuunka leh. Waxaa loo adeegsadaa cabashooyin badan oo ah kaadi-mareenka taranka, laakiin inta badan waxaa lagu daraa geedo leh tayo jeermis-dilis badan, halka soosaaridda galleyda macaan ay ka caawiso inay dejiso nudaha xanaaqa. Inkasta oo ay tahay durayo, waxa kale oo ay ka faa'iidaysan kartaa kaadida joogtada ah iyada oo dejinaysa xanaaqa kaadiheysta. Cilmi-baaris Shiinees ah ayaa tilmaamaysa in soosaarka galleyda macaan ay yareyso dhiig-karka oo ay yareyso waqtiga xinjirowga dhiigga.